Meeshaan Abbaa Hojetateef Dhimma Baasa | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
February 19, 2017 OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA.ORG	Leave a comment
Fincila Xummura garbummaa Qeerroo fi Qarreen Oromoo dhigaa isaanii itti lolaasanii fi lolaasa jiran ukkamsuu namchi Obbo Kamal Ahamed Jedhamu tasa darbtee nama Obbo Lammaa Magarsaa jedhu preidantii OPDO muddatee jirti. Hojiin TPLF kun homaa nu dinquu hin qabu. Akkauma ammala ishee kunis yoo lubbuu ishee kan dheeressuuf tahe yaalaa jirti. Karaa koo akka nama Oromo hubannaa fi muxxannoo qabsoo uummata Oromoo keessaa qabutti OPDO irraa waan haaraa eegachuun burjaaja’uu dha. Anaaf akkuma TPLF irraa waan haaraa eegachuu irraa gargarumaa hin qabu.
Uummatni Oromoo Kabaa amma Kibaa, Bahaa amma dhihaa akka nama tokkotti ka’e yaroo TPLFiin kokkee qabee, akka Labsii Hatattamaa bahu yaroo dirqu Obbo Lammaan isa jira? Yoo waa’ee tokkummaa ijaarsota siyaasaa kan oddeessu tahe uttu ijaarsonni har’a jira jedhan hunduu tokko tahanii bulanii boru immoo haaraan amma sana dhalatee buluu danda’a. Ijaarsota siyaasaa tokkoo goona yaadni jedhu bajuu dha. Warri kaayyoon wal fakkaatu wal barbaadee waliin dhaabbatu malee akka baaqelaa fi boqqoloo walitti qabanii xuwwee tokko keessatti kan afeelan miti.
Previous PostEthiopia Leans toward Chinese Economic TiesNext PostMeeshaan Abbaa Hojetateef Dhimma Baasa